उपेक्षित छन् काठमाडौं उपत्यकाका पोखरीहरु [फोटोफिचर] | आर्थिक अभियान
उपेक्षित छन् काठमाडौं उपत्यकाका पोखरीहरु [फोटोफिचर]
असार ४, काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी हो, काठमाडौं । आधुनिक समाजको उच्च वर्ग बस्ने शिक्षित नागरिकहरुको शहर पनि हो, काठमाडौं । भनिन्छ, शिक्षित समाज र शिक्षित व्यक्तिले नैतिकताको विकास गर्छ । काठमाडौं शहरमा बस्ने अधिकांश मानिस शिक्षित छन् । तर आफ्नो शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने कसरी ? र कहिले र ? यो प्रश्न सधैं नै हुँदै आइरहेको छ ।
शहरमा शिक्षित मानिसको बसोबास रहेपनि नैतिकता भने कै देखिन्छ । शिक्षित मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी फोहोर र अव्यवस्थित देखिन्छ । जनचेतना भएर पनि प्रयोगात्मकरुपमा कमजोर छन्, शिक्षित शहरका मानिसहरु । यो हेर्न र प्रमाणित गर्न अन्त जानै पर्दैन, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका केही पोखरीहरुको कन्तबिजोकले नै यो कुरा स्वतः प्रमाणित गर्छ ।
मल्लकालीन सभ्यता र कलाको नगरीकारुपमा परिचित काठमाडौं पहिचन बोकेको शहर हो । तर आज काठमाडौंको पहिचान, सुन्दर, हराभरा, व्यवस्थितको ठिक विपरित् छ भन्दा फरक पर्दैन । करोडौं खर्च गरेर सिंगारिएको काठमाडौंको कमल पोखरी होस् वा राज्यस्तरबाट बेवास्तामा परेको चापागाँउको पल्स्वा पुखु, यी सबैको अवस्था उस्तै छ ।
खानेपानीको समेत हाहाकार रहेको काठमाडौंका पोखरीका पानी फोहोर हुनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर पोखरीमा तैरिरहेका बोतल, प्लाष्टिक र कागजका टुक्राहरु अनि जीर्ण भइसकेको पोखरीको पुनर्निर्माण नहुनुले यो भव्य शहरका नागरिकहरुलाई गिज्याइरहेको स्पष्ट हुन्छ । पोखरी वरपर उत्तिकै झारपात उम्रेका छन् । कतिपय पोखरीको पर्खाल भत्केको छ अनि माटोको थुप्रोमा फोहोर डंगुर देख्न सकिन्छ ।समय समयमा सरसफाई नभएका पनि होइनन् । पुनर्निर्माणका काम पनि भएका छन् तर यसले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । हुन त राजधानीका केही पोखरीमा लुगाधुने नुहाउने मात्रै होइन पौडी पनि खेलिन्छ । यस्तै खाले क्रियाकलापले पनि पोखरीहरु दुषित भइरहेका छन् ।
अब वातावरणीय समस्याहरू कम गर्न सम्पूर्ण आम सरोकारवालाहरू पनि जागरुक हुनुपर्छ । प्रदुषित वातावरणले मानव स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई नराम्रो असर पार्दछ । त्यसैले संविधानले नै दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, पहिचान, कला जोगाउन नसके हामीले देशकै पहिचान जोगाउन सक्दैनौं । यसअर्थ पनि इतिहास बोकेका संरचना बचाउँदै, भत्केका र जीर्ण रहेका तालतलैया, पोखरीको मर्मतसम्भार गरेर आफ्नो पहिचान र शिक्षित वर्गको परिचय हामी शहरीवासीले नै दिनुपर्छ ।
भौतिक सुविधा तथा सेवाको उपलब्धताले मानव बसोबासको व्यापक दबाबमा परेको शहरी क्षेत्रको व्यवस्थित शहरीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा छ । साथै शहरी क्षेत्रमा नैतिकताको जनचेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
गुइत पोखरी, पाटन
नागद दह, धापाखेल
भक्तपुरको भाज्या पुखु
भक्तपुरको मध्यपुर गार्चामा रहेको स्वगां पुखु
सप्तपाल पोखरी, लगनखेल
हरिसिद्धि पोखरी, हरिसिद्धि
तस्वीरहरु : न्यूज एजेन्सी नेपाल